I-Titanium Aluminiyam Carbide, iAluminiyam yeSilicon Master Alloys - Xinglu
I-oksidi yoMhlaba enqabileyo
Umhlaba onqabileyo weNitrate
Umhlaba onqabileyo weFluoride
Umhlaba onqabileyo weChloride
Izinto eziphucukileyo, ubomi obungcono
Ngoku, sijongana ikakhulu nezinto ezinqabileyo zomhlaba, imathiriyeli ye-nano, imathiriyeli ye-OLED, kunye nezinye izinto eziphambili.
Shanghai Xinglu Chemical Technology Co., Ltd ibekwe kwiziko lezoqoqosho-Shanghai.Sihlala sibambelela "kwizinto eziphucukileyo, ubomi obungcono" kunye nekomiti yoPhando kunye noPhuhliso lweteknoloji, ukwenza ukuba isetyenziswe kubomi bemihla ngemihla yabantu ukwenza ubomi bethu bubengcono.
Ngoku, sijongana ikakhulu nezinto ezinqabileyo zomhlaba, izixhobo ze-nano, i-master alloy, kunye nezinye izinto eziphambili.Ezi zixhobo eziphambili zisetyenziswa ngokubanzi kwi-chemistry, amayeza, ibhayoloji, umboniso we-OLED, ukukhanya kwe-OLED, ukukhuselwa kwendalo, amandla amatsha, njl.
Okwangoku, sinemizi mveliso emibini kwiPhondo laseShandong.Igubungela indawo eyi-30,000 square metres, kwaye inabasebenzi abangaphezu kwe-100 labantu, apho abantu abali-10 baziinjineli eziphezulu.Siye saseka umgca wemveliso olungele uphando, uvavanyo lokulinga, kunye nemveliso yobuninzi, kwaye siseke iilebhu ezimbini, kunye neziko lovavanyo elinye.Sivavanya imveliso nganye phambi kokuhanjiswa ukuze siqinisekise ukuba sibonelela ngemveliso esemgangathweni kumthengi wethu.
Samkela abathengi abavela kwihlabathi liphela ukuba bandwendwele umzi-mveliso wethu kwaye baseke intsebenziswano elungileyo kunye!
KHETHA IIMVELISO OZIFUNAYO
Sihlala sifuna ukubonelela abathengi bethu ngokuthenga okukodwa, kunye nesisombululo setekhnoloji.
Ukucoceka okuphezulu I-Silicon oxide / i-Silicon dioxide / i-S...
Nano cerium oxide umgubo CeO2 nanopowder/nanopa...
Ubhedu Arsenic Master Alloy CuAs30
Aluminiyam boron master ingxubevange AlB8
ILanthanum Boride LaB6
99.9% -99.999% enqabileyo umhlaba Cerium Oxide CeO2 nge...
Nano Al2O3 aluminium Oxide alumina powder
Nano silicon diokside powder / Silica nanopowder...
Funda Izinto Ezingakumbi
©Copyright 20102019 :Xinglu Chemical Onke Amalungelo Agciniwe.
Ukusetyenziswa kwe-nano cerium oxide kwi-polymer
Izinto zomhlaba ezinqabileyo IMagnesium yomhlaba ...
Njengoko ukungavisisani phakathi kweUkraine neRussia...
Ikamva leMigodi yeMicimbi yoMhlaba eRare ...
Thenga (Ba) intsimbi yeBarium 99.9%